चन्द्रमाको जग्गा बेचेर अर्बपति ! « Clickmandu
चन्द्रमाको जग्गा बेचेर अर्बपति !
प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७४, शनिबार २०:१९
चन्द्रमा जग्गा बेचेर अर्बपति सुन्दा अचम्म लाग्ने कुरा हो । तर, अमेरिकामा एक व्यक्ति चन्द्रमामा जग्गा बेचेर अर्बपति भएका छन् ।
उनले अहिले ७० लाखजनालाई चन्द्रमामा जग्गा बिक्री गरेका छन् । उनले चन्द्रमामा जग्गा बेच्नको लागि लुनार एम्बेसी हो । जसले चन्द्रमामा जग्गा बेच्ने काम गर्छ ।